के प्रियंका र निकको बिवाह फेक हो ?
एजेन्सी । अभिनेत्री प्रियंका चोपडा र अमेरिकी गायक निक जोनसले डिसेम्बर १ मा क्रिश्चियन र डिसेम्बर २ मा हिन्दु परम्परा अनुसार विवाह गरे । तर उनीहरुको बिवाहको केही दिन नबित्दै अमेरिकाको ‘द कट’ नामको म्यागेजिनले बुधबार ‘के प्रियंका चोपडा र निक जोनसको माया साँचो हो ? भन्दै एक लेख प्रकाशित गरेको थियो ।
यो लेख अमेरिकी पत्रकार मारिया स्मिथले लेखेकी हुन् । साथै यो लेखमा प्रियंकालाई ग्लोबल स्क्याम आर्टिस्ट भनिएको छ भने प्रियंका र निकको विवाहलाई एक धोका बताउँदै निकका साथ प्रियंकाले जबरजस्ती विवाह गरेको बताइएको छ । मारिया स्मिथले उनको यस लेखमा प्रियंका र निकबीचको विवाह प्रियंका र उनको टिमद्वारा योजनाबद्ध भएको र यो सम्बन्ध निकको इच्छा विपरित भएको उल्लेख गरिएको छ ।
बिहीबार २० मङ्सिर, २०७५ १५:२५:०० मा प्रकाशित